Caasimada Online | Isha Wararka Sugan » Caafimaadka
Tue, 07 Jul 2015 04:29:05 +0000
Carruurta kusoo ciyaarta banaanka oo ka indho wanaagsan kuwa guryaha lagu hayo (Warbixin)
Thu, 19 Mar 2015 21:30:36 +0000
WD Yusuf Shuqale Hassan
Carruurta ayay qasab tahay in lagu dhiirrigeliyo iney dibadda guriga ku soo ciyaaraan si ay uga gaashaantaan aragga indhahooda oo yaraada.
Xaaladda aragti ee ugu daran oo loo yaqaano Myopia ayaa ayadu sababta in waxyaabaha fog fog ay u muuqdaan kuwo cawiran “Blurred” , halka waxyaabaha kugu dhowna aad u arki kartid si waadax ah, laakin tani, waa Myopia’e, waxey kugu hoggaamineysaa indho la’aan.
Inkastoo kiisaska Myopia ay awalba sarreeyeen ayaa hadana qabiir indhaha ku taqasustay oo Australian ah waxey ka digeysaa iney dhaqsa u kordheyso cabsida laga qabo Myopia.
Cilmi baaris ayaa muujineysa in Myopia ku badaneyso dalalka ay ka jirto nidaamka waxbarashada deg degga ah “Intensive Education Regime” kuwaaso carruurta ku qasba iney waqti badan ku bixiyaan joogitaanka guriga.
Prof. Kathryn Rose oo madax ka ah qeybta Orthopedics ee University Of Technology Sydney, ayaa tiri “Waxaanu ogaaneynaa inuu koritaan sare oo Myopia ah jiro, taaso dhibaato weyn nagu keeneysa”
Waxey sidoo kale sheegtay in qodobo xagga deegaanka quseeya ay door weyn ku leeyihiin kobcitaanka Myopia.
“Wey caddahay in arrimo xagga deegaanka ah ay xowli u yeelayaan Myopia, maxaa yeelay baahsanaanta koritaanka ee waddamada qaar ay cirka isku shareertay muddoo tobaneeyo sano ah” ayey tiri Prof. Rose.
“Inkastoo dadku u malayn jireen in Myopia ay tahay Hiddo, laakin haatan waa waadax iney aad u kordheyso, sidaa darteed ma dhihi karo waa wax la iska dhaxlo laakin waxaanu dhihi karnaa waxaa jira qodobo xagga deegaanka ah”.
Waddamada waxbarashada u qiimeeya sida deg degta ah ee carruuta aan inta badan siinin fursad ay bannaanka ku qaataan, ayaa iminka kaalimaha hore kaga jira kuwa helay Myopia, sida ay sheegtay Rose.
Warbixin dhowaan isbar-bardhig ku sameysay ilmaha Chineseka ee ku nool Australia iyo kuwa ku nool Singabore ayaa lagu ogaaday in carruurta Chineseka ee Australia ay ka hooseeyaan heerka cudurada indhaha marka loo eego kuwa ku nool Singabore.
Carruurta Chineseka ee Sydney ku nool ayaa ah 3% kuwa qaba Myopia halka kuwa Singabore ku noolna ay qabaan 29%.
Australia carruurta Chineseka ah ayaa toddobaadkii waxey dibadda ku soo qaataan 13 saacadood, halka kuwa Singabore ay 3 saac oo qura ay dibadda ku qaataan.
“Myopia wax shaqo ah kuma laha Jinsiga qofka ee waa wax la socda qaab nololeedkaada.” Ayey Prof. Rose sheegtay.
Fallaaraha ama waxyaabaha la arkayo ayaa intii ku dhici lahaayeen qeybta dambe Nudaha Iftiinka dareema ee loo yaqaano Retina, waxey ku dhacayaan qeybta hore ee Retina taaso ka dhigeysa in waxii la arki lahaa ay cawir yeeshaan “Blurred”.
Waddanka Australi ayaa 20% dadku qabaan Myopia, UK mid ka mid ah saddexdii qofba waa uu aragti gaaban yahay halka Ameerika ay 24% saameysay shacabka.
Dunida kale, sida Bariga Asia aad bey qubaradu uga digayaan oo wey ku badan tahay.
Wargeyska Nature ayaa sheegay dhalinyarada dalka China ee ka yar 20ka sano ay 90% aragtidoodu gaaban tahay, ayadoo 60 sano ka hor dalkaas China ay ahaayeen 10-20 boqolkiiba dadka aragtida gaaban dhamaan dalka oo dhan.
Sidoo kale qiyaas la sameeyey ayaa sheegeysa in dunida oo dhan saddex meelood hal meel (1/3) ay qabi doonaan Myopia dhamaadka sanadka 2019ka.
Padmaja Sankaridurg oo ah madaxa barnaamijka Myopia ee mac-hadka Brien Holden Vision Institute ee magaalada Sydney ayaa isagu ku dooday “Waxaanu iminka ciriiri gelineynaa waddadii ay mari lahayd Myopia.”
Laakiin Prof. Rose ayaa ka digtay in macluumaadka la heli karo ay aad u xaddidan tahay loona baahan yahay in baaritaanka la sii wado.
“In badan oo ka mid ah tani waa wax aan rasmi aheyn, waxeyna ka imaaneysaa dhaqaatiirta indhaha oo ayagu aad ay u quseyso koritaankan Myopia ee carruurta yar yar”
“Waxaanu ku talineynaa in carruurta ay da’doodu ka hooseyso lix sano jir ay qasab tahay iney bannaanka guriga ku soo qaataan 10 saacadood toddobaadkii taasoo ka caawineysa iney ka hortagaan Myopia” ayay ku soo gabagabeysay Prof. Kathryn Rose.
Internetka oo xilli dhow lagu ogaanayo xaaladda caafimaad ee wadnahaaga
Sat, 14 Feb 2015 12:39:17 +0000
In shabakadda internet-ka lagu xiro qof wadnihiisa ayaa goor dhow noqon doonta arrin dhab ah ka dib markii ay dhaqaatiirtu soo saareen qalab wadnaha qofka lagula xirayo WiFi si loo ogaado xaaladdiisa taam ahaanshiyo.
Reveal Linq Monitor, waa qalab jooga 2 kun oo ginni, waana qalab yar oo la gelinayo maqaarka meel ku dhow wadnaha si loo helo jawaabta xaaladda caafimaad ee wadnahaaga.
Waxaa uu qalabkaani awood u leeyahay in laga daalacdo wadnaha ka hor inta uusan akhbaarta uu uruuriyey u dirin dhaqaaqiirta iyadoo la isticmaalayo WiFi, waxaana haatan loo istcimaalayaa masrixiyad caafimaad.
Qalabka sarre oo kaa caawin doona inaad internet-ka ku hubiso xaaladda caafimaad ee wadnahaaga
Waxaa la rajeynayaa inuu qalabkaani noqdo mid muhiim ah oo ay isticmaalaan dadka bukaan socodka ah dhammaadka sannadkaan 2015ka maadaama ay tahay fikrad sahlan.
Doreen Van Der Vliet, oo 77 sanno jir ah, ayaa noqday qofkii seddaxaad ee British ah ee isticmaalay qalabkaan ka dib markii uu wadne xanuun ku dhacay isaga bishii January 2014kii.
Qalabkaan ayaa awood u leh inuu ku siiyo warbixin la xiriirta xaaladda caafimaad ee wadnahaada muddo 46 ilbiriqsi gudahood ah.
Halkaan ayaa waxaad ka arki kartaa waxyaabo kuu sharaxaya sida uu qalabkaani u shaqeynayo
Doorka ay darmaanta ka qaadan karto xalinta kacsi la’aanta odaygeeda (Aqri)
Fri, 10 Oct 2014 00:00:25 +0000
Ciniinnimada ninka haysaa haddaanay ahayn mid cusbitaal iyo qalliin u baahan, balse tahay mid nafsiyadeed oo waqti ku xiran, u heli meyno ninkaasi dhakhtar kaga wanaagsan darmaan uu jecel yahay iyana jecel oo ku daaweeysa istiimin iyo dhiirri gelin.
Haweeneydu kolka ay aragto in ninkeeda degganaan la’aani hayso, waa inay isweydiisaa haddii ay iyadu sabab u tahay iyo inkale, waana inay tamar iyo taag waxay leedahay isugu geysaa sidii ay gacalkeeda u badbaadin lahayd. Waa inay raaxadeeda qayb kamid ah u hurtaa sidii ay wax waliba dabeecigoodii ugu soo laaban lahaayeen. Waa inay dib ugu hurisaa qalbigiisa dab jacayl isaga oon dareemin, tiiyoo intay mar waliba miraayadda hor tagto oo hadba meel iska jebiso dhar cusubna qaadato, beddesha habkii ay u shanleysan jirtay iyo barafuunnadii ay isticmaali jirtay. Waa inay ku dadaashaa cuntada ay siiso, iyada oo wax waliba ka hor marinaysa cuntooyinka rabitaankiisa kiciya sida; kalluunka, hilibka, beerka, ukunta, cabitaannada la miiro, iwm.
Sidoo kale waa inay guriga quruxdiisa ku dadaashaa, kolka ay ninkeeda la joogtana si waayo aragnimo ah isugu dartaa ereyo jacayl, xodxodasho iyo kaftan. Haweeneyda uu ninkeedu ciniin noqdo waxaa lagama maarmaan ah inay waqtiga galmada u dhaqanto si xilkasnimo ku jirto, sababta oo ah ninka caynkaasi ah oo ka dareema xaaskiisa degganaan la’aan waxaa u kordha dhaawac iyo quus dheeraad ah. Waa inay ismoogeysiisaa ciniinnimada ninkeeda, kaftan iyo faracayaarna ugu dhaqaaqdaa. ninku kolka uu arko xaaskiisa isku darsatay qurux, soojiidasho iyo furfurnaan, waxaa markaasi sare u kaca rabitaankiisa jinsi.
Waxa la’isku raacay in dumarka waqtiga galmada reema, ereyada ay dheguhu ku raaxaystaanna ku aadaaraa ay toosiyaan dareenka ragga kuwa ugu ciniinsan. Waxa la yiri nin baa mid kale weydiiyey: “Dumarkiinna ka warran”. Markaas buu ugu jawaabay: “Waxay ku daran yihiin dhunkashada, dhuuqmada iyo lugo dhinac ka marinta”. Markaas buu kii su’aasha keenay intu yiri: “Kol haddaanay inta aad sheegtay qaylo dhaan ku dereyn aniga way iga dhinteen” halkii uga dhaqaaqay.
Waxaa la yiri: (Nin baa u yimid Cali bin Abii-Dhaalib (RC), kuna yiri: “Amiirul-Mu’miniinow waxaan qabaa naag markaan utegayo tiraahda: (Waad idishay..waad idishay!). Markaas buu Cali (RC) ku yiri: “Dil anigaa diyadeeda bixinayee”).
Haddaba haweeneyda, ha qabo nin ciniin ah ama mid calaacul sitaaye, waxaa laga doonayaa inay ninkeeda dareensiido inuu khatar yahay oon ragannimo u laabnayn, geedkiisana xumaan iska daaye aanay asagaba xamili karin, xitaa haddaanay ayadu xaajo ka lahayn.
W/D: Sabriye Macallin Muuse.
Asalka Cabista Sigaarka oo la ogaaday meesha uu Salka ku Hayso.
Sun, 10 Aug 2014 21:49:25 +0000
Hadii aad Sigaarka Cabto marka hore ugow Meesha laga keenay Cabista Sigaarka, kadibna Go’aan gaar.
Cabista Sigaarka waxay nooga Timid dhaqamo shisheeye, mana ka mid aha dhaqamadii wanaagsanaa ee soomalidu lahayd.
Dhaqan kasta oo aynu aragno waxa uu hoos tagaa Diin ama Caado umad leedahay.
Sigaarku waa Shay Dab ah oo afka laga Cabo, kadibna Sanka laga soo Daayo Qiiq Madow oo soo dhex maray sambabka Qofka Binu aadamka ah.
Hadaba Rumayso ama ha Rumaysan Cabista Sigaarka waxa laga keenay mid ka mid Diimaha aduunka ugu Waaweyn, Dhiintaas oo ah Diinta Kiristaanka.
Qofkii Cabana waxa uu Fulinaya mid ka mid ah Dhaqamada Xunxun ee ku qoran Bible-ka Gaalada.
Kitaabka Gaalada ee loo yaqaan Bible-ka ayaa si Xun oo anshaxa ka Baxsan u Caayey ilaahay isagoo ku sifeeyey in uu afka Shay Dab ah Gashto kadibna uu Sankiisa kazoo Daayo Qiiq oo waliba Qiiqaas uu kazoo Baxo Labada Dalool ee Sankiisa !!!!.
Sidaas Daraadeed ayaa Culimadi Kiristaanku ay u soo saareen Sigaarka si ay U sameeyaan waxay aaminsan yihiin oo ah in ilaahay sidaas sameeyey !!!.
Hadaba Akhriso Meesha ay kaga Qorantahay Bible-ka Arintaas, iyadoo Saddex Luqadood ah, Luqadda Carab